Mpanamboatra RNA Kit Virus TIANamp tsara indrindra | Hongyu
Kitapo fanadiovana viriosy RNA matihanina.
TIANamp Virus RNA Kit dia manome fomba haingana sy mety hahazoana RNA viralin'ny fahadiovana avo lenta. Izy io dia mandray ny teknolojia membrane silica sy ny Carriers RNA hisitrihana sy hamoahana ny ankamaroan'ny virus RNA amin'ny karazana santionany. Viral RNA voadio miaraka amin'ity kitapo ity dia vonona avy hatrany hampiasaina amin'ny fidinana any ambany na amin'ny fampiharana hafa.
4992286 Preps 50
Vokatra avo lenta: Ny Carriers RNA dia manampy amin'ny fanamafisana ny vokatry ny virus RNA.
Fahadiovana avo lenta: manala ny ankamaroan'ny loto ny membrane silika.
Fampiasana midadasika: Mety amin'ny karazana santionany.
Fandidiana haingana: Virus RNA dia azo alaina ao anatin'ny adiny 1.
Karazana: Mifototra amin'ny tsanganana spin
Santionany: Plasma, serum, tsiranoka tsy misy sela, sns.
Kendrena: Virus RNA.
Volavola fanombohana: ~ 140 μl
Fotoana iasana: ~ Adiny 1
Fampiharana ambany: RT-PCR / RT-qPCR, fananganana tranomboky NGS, fanehoan-kevitra amin'ny anzima, sns.
F: ADN kely na tsia amin'ny eluent.
A-1 Fibebahana sela na virus kely amin'ny santionany fanombohana
—Manatsara ny fatran'ny sela na viriosy.
A-2 Tsy ampy ny lisis an'ireo santionany
—Ny santionany dia tsy nafangaro tsara tamin'ny buffer lysis. Soso-kevitra ny afangaro amin'ny vortexing mandritra ny 1-2 fotoana.
—Lysis tsy ampy amin'ny sela noho ny fihenan'ny proteinase K.
—Lysis tsy ampy na fahasimban'ny proteinina noho ny fotoana tsy ampy amin'ny fandroana mafana. Soso-kevitra ny hanapaka kely ilay sela ary hanitatra ny fotoana fandroana mba hanesorana ireo sisa tavela ao anaty lysate.
A-3 Adsorption ADN tsy ampy.
—Tsy nasiana éthanol na isan-jato ambany fa tsy éthanol 100% alohan'ny namindrana ny lysate ho any amin'ny tsanganana fihodinana.
A-4 Ny sanda pH amin'ny buffer elution dia ambany loatra.
- Amboary ny pH hatramin'ny 8.0-8.3.
F: Ny ADN dia tsy mahomby amin'ny fanandramana fanehoan-kevitra anzima ambany.
Ethanol sisa tavela amin'ny eluent.
—Misy sisa tavela buffer PW ao amin'ny eluent. Ny etanol dia azo esorina amin'ny alàlan'ny fanodinana ny tsanganana fihodinana mandritra ny 3-5 min, ary avy eo apetraka amin'ny hafanan'ny efitrano na «incubator» 50 for mandritra ny 1-2 min.
F: fahasimban'ny ADN
A-1 Ny santionany dia tsy vaovao.
—Mindrà ADN santionany tsara ho fanaraha-maso hamaritana raha efa simba ny ADN tao amin'ilay santionany.
A-2 Fitsaboana mialoha tsy mety.
—Ny antony nitotoan'ny nitroka ranoka be loatra, ny fahazoana indray ny hamandoana, na ny haben'ny santionany.
F: Ahoana ny fanatanterahana ny pretreatment amin'ny fitrandrahana gDNA?
Ny pretreatment dia tokony miovaova amin'ny santionany isan-karazany. Ho an'ny santionan'ny zavamaniry, alao antoka fa hikororoka tsara ny azota azota. Ho an'ny santionan'ny biby, homogenate na totoina totozy azota. Ho an'ireo santionany misy rindrin'ny sela izay sarotra vakiana, toy ny bakteria G + sy ny masirasira, dia soso-kevitra ny hampiasa lysozyme, lyticase na fomba mekanika handravana ireo rindrin'ny sela.
F: Inona ny fahasamihafana misy amin'ny kitapo fitrandrahana gDNA telo 4992201/4992202, 4992724/4992725, 4992709/4992710?
4992201/4992202 Kit Genomic DNA Kit dia mampiasa fomba miorina amin'ny tsanganana izay mitaky kloroform amin'ny fitrandrahana. Izy io dia mety indrindra amin'ny santionan'ny zavamaniry isan-karazany, ary koa vovo-tany maina. Ny Kit Fambolena Hi-DNAsecure dia miorina amin'ny tsanganana ihany koa, saingy tsy mila fitrandrahana phenol / chloroform, mahatonga azy io ho azo antoka sy tsy misy poizina. Izy io dia mety amin'ny zavamaniry misy polysaccharides avo sy atiny polyphenol. 4992709/4992710 DNAquick Plant System dia mampiasa fomba miorina amin'ny rano. Ny fitrandrahana Phenol / chloroform dia tsy ilaina koa. Ny fomba fidiovana dia tsotra sy haingana ary tsy misy fetra ho an'ny santionany fanombohana, amin'izay ny mpampiasa dia afaka manitsy ny vola miovaova arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fanandramana. Ny sombina gDNA haben'ny habe dia azo raisina amin'ny vokatra avo.
F: Inona ny tombam-bidy azo amin'ny gDNA amin'ny santionan'ny ra 1 ml avy amin'ny TIANamp Blood DNA Kit?
Ny ADN genomika dia nalaina avy tamin'ny habetsaky ny santionan'ny ra iray manontolo tamin'ny alàlan'ny TIANamp Blood DNA Kit. Ny valiny dia toy izao manaraka izao. Ny valiny dia voatanisa ho referansa fotsiny, ny valin'ny fitrandrahana tena izy dia miankina amin'ny toe-javatra santionany.
F: Azo ampiasaina ve ny 4992207/4992208 sy 4992722/4992723 hitrandrahana ADN mivaingana ny rà?
Ny fitrandrahana ADN dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny reagents omena amin'ireto kitapo roa ireto amin'ny fanovana tsotra izao ny protokoleta amin'ny torolàlana manokana momba ny fitrandrahana ADN. Ny kopia malefaka an'ny protokolon'ny fitrandrahana ADN dia azo avoaka rehefa mangataka.
F: Rehefa mampiditra TIANamp Genomic DNA Kit, ahoana ny fanodinana ireo sela vaovao amin'ny fampiatoana ny sela?
Atsaharo ny santionany vaovao amin'ny PBS 1 ml, sira masira na buffer TE. Homogenize tanteraka ny santionany amin'ny alàlan'ny homogenizer iray ary angony ny fantsona mankany amin'ny faran'ny fantsona iray amin'ny alàlan'ny centrifuging. Atsipazo ny supernatant, ary avereno ampidirina amina buffer 200 μl buffer ny GA. Ity fanadiovana ADN manaraka ity dia azo tanterahina arakaraka ny torolalana.
F: Ahoana ny fisafidianana ny vokatra ho an'ny fitrandrahana ADN amin'ny santionan'ny plastika, serum ary tsiranoka?
Ho an'ny fanadiovana gDNA amin'ny plasma, serum ary santionan'ny tsiranoka amin'ny vatana, TIANamp Micro DNA Kit no tolo-kevitra. Ho an'ny fanadiovana ny virus gDNA amin'ny santionany / plasma, TIANamp Virus DNA / RNA Kit no tondroina. Ho an'ny fanadiovana gDNA amin'ny bakteria avy amin'ny santionan'ny serum sy plasma, dia tolo-kevitra ny Kit Kit ny bakteria TIANamp Bacteria (tokony ampidirina amin'ny bakteria tsara ny lysozyme). Ho an'ny santionan'ny rora, kitapo Hi-Swab DNA Kit ary Kit Kit ny bakteria TIANamp Bacteria no tolo-kevitra.
F: Ahoana ny fomba hisafidianana ireo fitaovana ho an'ny fitrandrahana gDNA amin'ny santionan'ny holatra?
Kitapo zavamaniry DNAsecure na System DNAquick Plant dia ampirisihina hitrandrahana génomine holatra. Ho an'ny fitrandrahana genome masirasira, kitapo ADN TIANamp yeast (1) tokony omanina ny lyticase.
Teo aloha: Fambolena vakana tany am-boalohany Rna fitrandrahana - sela TGuide / Tissue / Kit RNA zavamaniry - TIANGEN
Manaraka: TIANSeq Kit kitapo ADN haingana (illumina)
AIV-H5 dia notapahina ho 10-5-10-8gradients misy rano Mill-Q. Santionany 140 μl dia nesorin'ny TIANamp Virus RNA Kit (DP315-R) sy kit mifandraika amin'ny mpamatsy A. Raha ampitahaina amin'ny mpamatsy A, TIANGEN dia manana fahombiazana avo lenta ho an'ny santionany ambany fitanana.
Kit kitona RT-qPCR: TIANGEN, FastKing Dingana iray Kit RT-qPCR (Probe)
RT-qPCR fitaovana: AB 7500 Rafitra PCR amin'ny ora tena izy.